Izikhundla zamandla e-NFL: UKyler Murray ubuyile - Nfl
Izikhundla zamandla e-NFL: UKyler Murray ubuyile
IVeki ye-13 ye-NFL isileyiti yayinobukhazikhazi xa ithelekiswa nezinye iziphumo ezibi esizibonileyo kwinyanga edlulileyo okanye ezimbini, kwaye okokuqala ngqa kwinto evakala ngathi ngonaphakade, umgangatho ophezulu wale veki ubuhlala ungatshintshanga. Ukuphumla kwi-bye yabo, abaPaki babambelela kwindawo yabo ephezulu ubuncinci iveki enye ngelixa iiCardinals kunye neBuccaneers zinamathela kwinombolo. 2 kunye no-3, ngokulandelelanayo, zombini ukufumana uloyiso lula. I-Patriots iphumelele ukhuphiswano lwasendle, olunomoya kunye neMithetho eYilwayo NgoMvulo Night Football ukuya kwinombolo. Isikhundla sembewu ye-1 kwi-AFC, ngelixa iiNkosi kunye neeCowboys zombini bezinyamekela ishishini ukujikeleza abathandathu abaphezulu beqela lam elite-tier. Ngeeveki ze-13 ezincwadini, nantsi iNqanaba lam laMandla elihlaziyiweyo.
6. I-Dallas Cowboys (8-4)
UKyler Murray ubuyile ngokusemthethweni.
I-Hype yeeKhadinali ipholile kwinyanga ephelileyo njenge-quarterback ye-superstar uKyler Murray kunye no-DeAndre Hopkins owamkela ishelufu bobabini bachacha kukwenzakala. Nge-backup Colt McCoy phantsi kweziko lemidlalo emithathu edlulileyo yeqela, ukhuselo lweArizona luthe cwaka (eluyiyo. yangena kwiVeki ye-13 kwindawo no. 3 kwi-Football Outsiders 'DVOA kwaye ikhokelwa ngokungapheliyo i-rusher ye-underrated pass rusher u-Chandler Jones) yenyuka ukuya ehlombe ngaphezu kwesabelo sayo somthwalo, inceda ukutyhala i-Arizona kwirekhodi ye-2-1 kweso sandiso. I-Arizona ayizange iphile nje ngokungabikho kwabadlali bayo ababini abakhubekisayo, ubukhulu becala iphumelele, ibona isibini sokuphumelela kwi-seahawks kunye ne-49ers ukuqinisa ukubamba kwayo kwi-NFC West. Ngoku bobabini uMurray kunye noHopkins babuyile-kwaye oko kujongeka njengeendaba ezimbi kubaceli-mngeni benkomfa yeqela.
Ngokuqinisekileyo kwakunjalo kwimpumelelo yeCardinals 33-22 ngokuchasene neBhere ngeCawa. Ukhuseleko lwase-Arizona lwaqhubeka luqhubeka, lukhetha u-Andy Dalton amaxesha amane ngelixa lidala uxinzelelo olungapheliyo ngaphambili. Kodwa ngokungqongqo, ulwaphulo-mthetho luthathe kanye apho luyeke khona ngaphambi kokuba liphulukane nezona ziqwenga zibini zibalulekileyo, kananjalo, uMurray wafumana iHopkins kwindawo yokuqala yeqela lokucofa iiyadi ezingama-20. I-quarterback yonyaka wesithathu ibonise iimpawu ezimbalwa zokugqwala ekuphumeleleni okulula, ukugqiba i-11 ye-15 imizamo yokupasa kwiiyadi ze-123 kunye nee-touchdowns ezimbini, kwaye wangena kunye nokutyikitya kwakhe ukuphumelela okudambisayo, Ukuzabalazela ukucofa ngasekupheleni kwekota yokuqala ngaphambi kokufunyanwa hlawula ubumdaka kwakhona kwisine kumgcini wokhetho lokufunda . Wawugqiba umdlalo ngeeyadi ze-59 kwaye loo manqaku mabini kwi-10 ithwala. Izinto azizange zihlale zihle kakhulu ku-Murray kunye ne-Arizona ulwaphulo-mthetho kwi-Soldier Field enomoya, enemvula enemvula, kodwa kwakungekho mathandabuzo ukuba ukubuya kwe-QB ye-QB e-double-threy injected some-matentially-deeden to the offension yeqela.
Umdlali x mollys umdlalo
Umdlalo wokuzama ukuPasa amaThathu ePasriots yayiyiBill Belichick yakudala
UMcCoy udlale indima yakhe kakuhle kwezi veki zintathu zidlulileyo, kodwa ukona kuka-Arizona kuba nzima kakhulu ukukhusela xa imoto kaMurray elawulwa ngunomathotholo-njengesantya siyinto. Uqhayisa ngobuchule obunqabileyo bokwenza imidlalo eqhumayo ngengalo yakhe kunye nemilenze yakhe yomibini, kwaye njengoko sikhunjulwe ngeCawe, ngomnye wabadlali abayingozi kakhulu kwindawo ebomvu kwiligi. Ukukwazi kuka-Murray ukutshintsha izibalo njengembaleki ekhetha ukufunda kunye nokwandisa imidlalo njenge-scrambler xa abachasi befaka ibhotile umdlalo oyiliweyo-yiloo nto emenza ukuba angakwazi ukuphinda athathelwe indawo kwityala likaKliff Kingsbury.
Ngokukhusela ibhola kunye nolwaphulo-mthetho olubuyela kumandla apheleleyo, i-Arizona iqhubela phambili kwi-homestretch yesizini ijonge njengelinye lawona maqela alungeleleneyo kwaye ajikeleze kakuhle kwi-NFL. Bakhe badlula kubunzima obunxulumene nokwenzakala kulo nyaka kwaye baye bahlanganisa umdlalo onomtsalane endleleni, ukuphumelela yonke imidlalo esixhenxe ekude kulo nyaka ngamanqaku ali-10 nangaphezulu . Akukho silingi yokwenyani into enokwenziwa leli qela xa zonke iisilinda zidubula.
patrick swayze deuce kabini
7. Iinkunzi zeegusha zaseLos Angeles (8-4)
8. IMithetho eYilwayo yeNyathi (7-5)
9. IiColts zase-Indianapolis (7-6)
11. Iitshaja zaseLos Angeles (7-5)
14. IiDolphins zaseMiami (6-7)
18. Iqela lebhola ekhatywayo laseWashington (6-6)
19. I-Pittsburgh Steelers (6-5-1)
UJonathan Taylor udlala kwiModi kaThixo.
I-Colts 'i-31-0 iphumelele i-Texans ngeCawa yayiyimveliso yokusebenza kweqela elibanzi, ukuphumelela kokuvala apho iqela lenze ngokugqibeleleyo kuzo zonke izigaba ezintathu. Ngoku ekubeni ndinaso esi sinyanzeliso sinyanzelekileyo ukuba siphume endleleni, ingcwele, uJonathan Taylor uyoyika kakhulu.
Jonga, ndiyazi ukuba kufanele ukuba ndichithe ixesha ndithetha malunga nendlela ukhuselo lwe-Indy oluyibambe ngayo iHouston ukuya kumahla alithoba okuqala ekuphumeleleni. Okanye indlela iiColts ezinciphise ngayo iTexans kwindawo ekhohlakeleyo yeeyadi ezi-2.8 kumdlalo ngamnye. Kuya kufuneka ndiqaphele ukuba uCarson Wentz uqhubekile nokudlala ibhola ecocekileyo, engenampazamo kwaye ujonge kwindlela yokuvusa into ebijongeka njengomsebenzi we-tatters. Kufuneka ndiqaphele ukuba uMichael Pittman Jr. 1 abamkeli kwi-NFL ngoku. Kodwa ubukhulu becala ndifuna ukuthetha ngoTaylor, owenza eyona nto ayibonayo nguDerrick Henry kulo nyaka (ngesimbo sakhe) kwindlela eya kwinto enokuphela ixesha eliphezulu-25 kwiiyadi ezibalekayo , nanini. Kule nguqulo ye-NFL edlulayo, ithetha kakhulu.
U-Taylor uqhubele phambili enye i-32 yokugijima kwiiyadi ze-143 kunye ne-touchdowns ezimbini kumdlalo, ebeka i-pro yonyaka wesibini kwindlela ye-1,763 yeeyadi ezikhawulezayo kunye ne-21 ekhawulezayo yokuchukumisa ngonyaka. Ngeminye i-336 efumana iiyadi phantsi kwebhanti yakhe kunye nemidlalo emine eseleyo, unokusitha iiyadi ezingama-2,000 XNUMX ukusuka kwi-scrimmage ngaphambi kokuphela kwesizini. Kodwa ayisiyiyo nje i-Taylor's volume stats eveleleyo (kwaye ndikholelwe, bayayenza: Ngeeveki ze-13, uthumele i-NFL-egqwesileyo i-1,348 yeeyadi zokugijima, i-NFL-i-16 egqwesileyo yamanqaku, i-NFL-egqwesileyo. Ngama-52 okuphoswa kukuwisa ngenkani , i-NFL-best 885 yards emva koqhagamshelwano, kunye ne-NFL-best 39 rushes of 10-plus yards). Okumangalisa ngakumbi kukuba ucacile ngaphezu komsebenzi wevolumu. Uninzi lweemethrikhi ezisebenzayo zikaTaylor ziphezulu, kwakhona: Ubeka indawo yesine kwi-NFL kwiiyadi emva kokuqhagamshelana nomzamo ngamnye, nge-PFF (3.67), okwesibini kwi-NFL kwisantya sokubaleka (i-37.6 ekhulwini), kwaye kuqala ukuleqa iiyadi ngaphezulu kokulindelweyo ngokuthwala (1.53) , ngokwe-NFL Next Gen Stats. Lo mfo ukhethekile.
UTaylor udibanisa amandla amsulwa okutyhala imfumba kunye nesantya esiphezulu sembaleki kunye nobuchule obuthandekayo bokubetha abakhuseli kwindlela eya kwindawo yokugqibela. Kwaye nangona ngokuqinisekileyo ingeyena kuphela isizathu sokuba iiColts zikhangeleke zikwazi ukubethelela ngaphezu kobunzima bazo kwi-playoffs esondela ngokukhawuleza, usebenza njengesihogo esinye somqhubi welo tyala.
IWashington yenza izinto zibe nomdla kwi-NFC.
Kubonakala ngathi sinokongeza ngokusemthethweni iQela leBhola eKhatywayo laseWashington kwimfumba yamaqela akhangeleka efile ngaxeshanye kweli xesha lonyaka kuphela ukuze aqiqe izinto kwaye azisebenzele kukhuphiswano lokudlala (bajoyina i-49ers, iDolphins, Colts, kunye neeEagles. , phakathi kwabanye abambalwa). Enkosi kukuphumelela kwe-17-15 kwi-Raiders ngeCawe, iWashington ngoku inomdlalo ophumeleleyo wemidlalo emine kwaye iyindawo yangoku yenombolo. 6 imbewu kwi-NFC.
Uguquko olukhulu lwaseWashington lulandele iVeki yesi-9, kwaye ngandlela thile ibingothusi kwaye iyadida. Kwelinye icala, ndize kwisizini ndicinga ukuba eli qela lizakubangcono kakhulu kunemveliso eliyikhuphe kwangoko, ngakumbi kwezokhuselo, ke into yokuba sele iqalisile ukubetha inyathelo layo ngoku noko iyandiqinisekisa. phambili. Kodwa bendiya kuxoka ukuba bendinokuthi ndinombono wokuba ukuguqulwa kweqela lexesha eliphakathi kuya kwenzeka nangona ilahleko ye-star pass rushers Chase Young (i-ACL iinyembezi) kunye ne-Montez Sweat (umhlathi ophukile). Endaweni yokwayama kubadlali ababini abakhuselweyo beqela kwi-stymie uDerek Carr kunye nesenzo esinamandla se-Raiders ngeCawa, i-mishmash yokuzaliswa iye yanceda ukuthabatha ukudelela ekupheleni kokuzikhusela, kunye nokungaziwa okufana noCasey Toohill, uJames Smith-Williams. , uDaniel Wise, uBunmi Rotimi, kunye noShaka Toney bonke abanegalelo. Kwaye umva weqela elisixhenxe, ebephoswe ngumlandeli osemva / ukhuseleko uLandon Collins (ukulimala kweenyawo), ukwazile ukwenza imidlalo embalwa emikhulu eyeyabo ekuphumeleleni, benza indima yabo ukubamba uCarr ukuya kwiiyadi ezingama-249 ezidlulayo kwaye kungabikho nto icothayo emoyeni, kumdlalo wakhe wesibini kule sizini ngaphandle kokupasa amanqaku.
umlo wegorha lesilwanyana lesitulo sezilwanyana
Ibiyinkqubo yamva nje eyomeleleyo kwiqela eliye laguqulwa laba yinto enobuchule nangona iqale unyaka ijongeka njengeyona ndawo imbi yeligi. Emva kokupha phezulu ngamanqaku angama-30 kumdlalo ngamnye kwimidlalo yayo yokuqala esixhenxe kule sizini, ukhuselo lwaseWashington lunikezele nje 17.5 amanqaku ngomdlalo ngamnye kwimidlalo emine edlulileyo yeqela. Iyavuthuza kanye ngexesha elifanelekileyo.
Ngokukhubekisayo, iWashington iphinde yazinikela kuhlaselo lwayo olukhawulezileyo emva kokuhamba kwaye nayo ibonakala ngathi ihlawule imbuyekezo kwangoko. Ukugijima u-Antonio Gibson udlala ibhola lakhe elihle kakhulu kwinyanga edlulileyo kwaye wahola kwakhona ngeCawa (kwi-JD McKissic ukungabikho) kunye needidi ze-88 kwii-totes ze-23, eziqhekezayo kwezinye iididi ze-23 kunye ne-touchdown kumdlalo odlulayo. Ukuqhekeka koxinzelelo kwi-shin yakhe akubonakali ngathi kuyamcothisa. Kwaye kunye noGibson kunye nomdlalo womhlaba obonelela ngesiseko, uTaylor Heinicke uzinzile kwaye wenze ngokwaneleyo ukutsala iWashington ukuba iphumelele. Umdlali odlalayo ugqibe i-23 ye-30 yokupasa kwi-196 yeeyadi ngeCawe, ephosa i-touchdowns ezimbini kunye nokukhetha enye. Wabonisa kwakhona ukuba udibanisa nje umlinganiselo ochanekileyo womlingo ongaphandle kwesakhiwo ngomonde kunye nokuziphatha komphathi womdlalo. Amanani apeyinta umfanekiso wekota eyanelisekile ngokusasaza ibhola kubadlali bakhe (uthumele umyinge we-7.6 yeyadi ubunzulu bokujoliswe kuko kwiiveki ezine ezidlulileyo kwaye ugqibe i-77 yepesenti yokupasa kwakhe kweso lulwalulo), kwaye ngelixa yena. uphoswe ngabamkeli abavuliweyo ngeCawa, wenze ngokwaneleyo ukugcina amatyathanga ahamba.
Ayinakuze ibe ntle kakhulu kweli qela, kodwa iWashington ibonakalise ukuba intle kakhulu kwinyanga ephelileyo-kwaye loo nto yenza iqela libe lilinye lokubukela ukolula. Ukudibanisa kunye neCowboys kwiveki ezayo kuya kunika iWashington ithuba lokuvavanya amandla ayo.
21. UDenver Broncos (6-6)
22. Abahlaseli baseLas Vegas (6-6)
URussell Wilson wayejongeka njengoRussell Wilson kwakhona. Ekugqibeleni.
Ngaphandle kokufumana uloyiso olufuneka kakhulu kwi-49ers ngeCawa, iingxaki ze-Seahawks kwindawo ye-postseason zihlala zikude. Kodwa ukusebenza kolwaphulo-mthetho kule veki kunokubonelela ngethemba. Ngokuqinisekileyo, uguquko olungeluhle lwenze ukuba iphepha lezibalo leyunithi libonakale libi kakhulu kunokuba belinokuba nalo (isiphelo esiqinileyo uGerald Everett waphuthaphutha kabini kwaye waphosa ipasile kumgca wokukora ojike waba yichoki), kodwa bekukho izizathu zokukholelwa ukuba. bobabini uRussell Wilson, kunye neqela ngokubanzi, bajika ikona ekudidekeni kwabo okudidayo kwaphakathi kwesizini.
Okwesihlandlo sokuqala okoko wabuyela ebaleni emva kotyando lomnwe, uWilson wayijula ​​ibhola ngokuchaneka okungaguqukiyo, wagqiba umdlalo wama-30-e-37 kwiiyadi ezingama-231 ngokucofa kabini kunye nokukhetha (loo nto yokunqanda bekufanele ukuba ibiyi-touchdown yakhe yesithathu; u-Everett. kananjalo uphulukene nepasi lefotsholo kumgca wokukora ebenokuba ngowesine). Okubaluleke ngakumbi, uWilson wakwazi ukuvula icandelo le-Seahawks yecala eliye langabikho ngokumangalisayo kwiiveki ezintathu ezidlulileyo (kunye nexesha elininzi lonyaka): umdlalo omfutshane kunye ophakathi okhawulezayo. UWilson wafaka i-pepper embindini webala ngokubetha ngokuchanekileyo, ukugqiba i-19 ye-20 imizamo yeeyadi ze-145 kunye ne-touchdown kwi-passes wayikhulula ngaphantsi kwemizuzwana ye-2.5.
URussell Wilson ugqibe ukupasa okungaphezulu kunokuba kulindelwe (+ 9.8% CPOE) kwiVeki ye-13 okokuqala ngqa emva kokubuya ekulimaleni.
UWilson uthintele i-49ers yokupasa ngokukhawuleza ngokupasa ngokukhawuleza:
Ixesha lokuphosa: 2.54 imizuzwana (ixesha-phantsi)
Inqanaba le-QBP: 17.1% (ixesha eliphantsi) #SEAvsSF | #Seahawks
— Izibalo zeGen elandelayo (@NextGenStats) NgoDisemba 6, 2021
Le midlalo incede iiSeahawks ukuba zishukumise amatyathanga kwaye zigcine iidrives ziphila ngokunempumelelo ngakumbi kunokuba bezinjalo kwiiveki ezidlulileyo, kwaye okokuqala ngqa isizini yonke, uSeattle waphumelela ukhuphiswano. ixesha lokulwa nomchasi wayo. Ngamafutshane, ulwaphulo-mthetho lwalubonakala ngathi aluzange lwaphule ngokupheleleyo. Ayiloloyiso luncinci olo.
Ukujonga phambili, uSeattle unelinye ithuba lokulungela iTexans kwiveki ezayo. Ukuba uWilson unokusebenzisa oko njengeplanga lokuzalisa ikhaya leqela, iiSeahawks zinokwenza ukubaleka kwindawo ebingalindelekanga. Okona kubi kakhulu, nangona kunjalo, utyando lwexesha lasemva kwexesha lunokuhamba umgama omde ekunciphiseni amathuba esiphithiphithi esikhulu se-offseason ngokuqinisekisa uWilson ukuba iSeattle yeyona ndawo iza kuba kuyo ixesha elide.
Icawe ye-kingman imbambano
Kuhlala Kunyaka olandelayo
27. Izigebenga zaseNew York (4-8)
29. IiJethi zaseNew York (3-9)
30. Iingonyama zaseDetroit (1-10-1)
31. IJaguars yaseJacksonville (2-10)
UEliya Moore yinkwenkwezi ezayo. Eneneni, kusenokwenzeka ukuba sele engomnye.
Kuya kuba lula ukuhlala kwizinto ezingalunganga xa kuziwa kwiiJets, njengoko zininzi. Kodwa ngoku, ndinomdla wokugxila kubuncinci into enye ekhanyayo: umamkeli we-rookie u-Elijah Moore. Owayesakuba ngumdlali we-Ole Miss uqale kancinci kwisizini enkosi ngokuyinxalenye yokwenzakala emlenzeni wangaphambi kwexesha, kodwa iqela elingathandabuzekiyo lenkampu yoqeqesho lifikile ngokusesikweni. Krwela ukuba, ungaphezulu kokufika kweli nqanaba; ukhangeleka ngathi yintshatsheli yexesha elizayo kule ligi.
UMoore ubambe ezinye iipasi ezithandathu zeeyadi ezingama-77 kunye nenqaku kwiqela le-33-18 ilahleko kwi-Eagles ngeCawe, umgca wezibalo onokuthi ube ngcono ukuba u-quarterback u-Zach Wilson akazange amphose kwinto ebekufanele ukuba ibe yi-touchdown elula ekuqaleni. emdlalweni. UMoore uye waphila kwimidlalo emithandathu edlulileyo yeqela, ngokuthe ngcembe wafumana indima enkulu kulwaphulo-mthetho njengoko ixesha liqhubeka. Ukubuyela kwiVeki ye-8, uMoore ubeka indawo yesithandathu kwi-NFL ekufumaneni iiyadi (459) kwaye uboshwe okokuqala kwi-touchdowns (ezintlanu) kweso sandiso. UMoore ubonise amandla okusebenza ukusuka ngaphandle nakwi-slot ye-Jets, kwaye ngokubaluleke kakhulu, wabonisa iimpawu zekhemistri kunye noWilson ngeCawa. IiJets zinendlela ende yokuyakha kwakhona, kodwa uMoore ukhangeleka ngathi uthatha indawo yokuhlala kude kube ngoku-umdlali odlalayo iqela elinokwakha malunga nexesha elide.
I-imeyile (iyafuneka) Ngokubhalisa, uyavumelana nathi Isaziso saBucala kunye nabasebenzisi baseYurophu bayavumelana nomgaqo-nkqubo wokudluliselwa kwedatha. Bhalisa
ujessica simpson nick lachey bonisa
umarshawn lynch ubaleka nabangcwele
Iimuvi ezinee-twist ezinkulu
abangcwele akukho mnxeba wokudlala
Izikhundla ze-nfl zangaphambi kwexesha lonyaka ka-2017
idada zezona zilungileyo
Iiflegi zelizwe ezijongeka kakuhle